काठमाडौ । अब ट्वीटरको सुपर फलो सुविधाबाट प्रयोगकर्ताहरूले पैसा कमाउन सक्नेछन् ।
ट्विटरको सुपर फलो सुविधा चाँडै आउँदैछ। यस सुविधा अन्तर्गत, ट्विटर प्रयोगकर्ताहरूले पनि पैसा कमाउन सक्नेछन्।
यो हाल परीक्षण भइरहेको छ, तर यो सुविधा कसरी काम गर्ने भन्ने बारे जानकारी प्राप्त भएको छ।
वास्तवमा टिपस्टर जेन मन्चनले एक जानकारी साझा गरेको छ। यहाँ देखाइएको छ कि ट्विटरको सुपर फलो फीचर कस्तो देखिन्छ।
यससँगै यहाँ पनि भनिएको छ कि सुपर फलो सुविधाका लागि मापदण्ड के हुनेछ।
रिपोर्टका अनुसार सुपर फलो फिचर ती प्रयोगकर्ताहरूको लागि मात्र उपलब्ध हुनेछ जसका अनुयायीहरू कम्तिमा १० हजार हुनेछन्।
दोस्रो सर्त यो हो कि ३० दिन भित्रमा कम्तिमा २५ ट्वीटहरु खाताबाट गरीएको हुनुपर्नेछ । तेस्रो सर्त यो छ कि प्रयोगकर्ताको उमेर १८ बर्ष वा माथि हुनुपर्छ।
सुपर फलो फिचरले कसरी काम गर्दछ ?
सुपर फलो सदस्यता को अवधारणा मा निर्मित एक सुविधा हो। यस अन्तर्गत, योग्य ट्विटर प्रयोगकर्ताहरूले सुपर फलोका लागि सदस्यता शुल्क लिन सक्दछन्।
यो एक सदस्यता कार्यक्रम हो । जहाँबाट प्रयोगकर्ताहरूले उनीहरूको छनौटको आधारमा सामग्रीमा पहुँच प्राप्त गर्छन्।
सुविधा आइसकेपछि यो सम्भव छ कि तपाईं आफ्नो सामग्री पहुँचको लागि ट्विटरमा शुल्क लिन सक्षम हुनुहुनेछ। युबट्युबले सामग्री सिर्जनाकर्ताहरूलाई भुक्तानी गर्ने तरिका, ट्विटरले उही लाइनहरूमा काम गर्ने प्रयास गर्दैछ, तर विधि भिन्न छ।
यहाँ, यूट्यूब जस्तै प्रयोगकर्ताहरूले प्रत्यक्ष पैसा प्राप्त गर्दैनन्, बरु मानिस सुपर फलोका लागि सदस्यता लिएर प्रयोगकर्ताहरूलाई पैसा दिन्छन्। कम्पनीले यस्तै टिप्स जार सुविधा र टिकटिंग स्पेस पनि ल्याएको छ।
टिप जारको बारेमा कुरा गर्दा यसलाई ट्विटरको पछिल्लो खाताको छेउमा राखिनेछ। यहाँबाट प्रयोगकर्ताहरूले तपाईंको खातामा गएर भुक्तान गर्न सक्दछन्।
टिकट स्थानको बारेमा कुरा गर्दा यस सुविधाका लागि कुनै स्थान होस्ट गर्ने प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो ठाँउमा प्रवेश गर्ने टिकट राख्न सक्षम हुनेछन्। यो उनीहरुको विज्ञापन हुनेछ । त्यो विज्ञापन तपाईको खाता मार्फत कसैले हेरेमा त्यो रकम तपाईलाई भाग लाग्नेछ ।
यी हुन् नेपालमा सर्वाधिक लाईक भएका १० फेसबुक पेज, तपाईले कहिलै देख्नुभएको थियो ?
नासाले अब मानव जीवन खोज्न शुक्रग्रह तर्फ लाग्यो, २ वटा यान पठाउने यस्तो तयारी
युट्युवबाट भन्दा अब इन्स्टाग्रामबाट धेरै पैसा कमाउन सकिने
जति प्रशंसा गरेनी कमी हुने क्यूट छोरीले फेसबुक मालिकको जागिर नभएको भनेपछि लेखे यस्तो स्टाटस
नेपालमा पहिलोपटक अक्सिजन ग्यास सिलिण्डरको उत्पादन परीक्षण